प्रम ओलीको दोश्रो पटक प्रत्यारोपण गरिएको मिर्गौलाका बारे डा. प्रेम ज्ञ‍वाली यसो भने ( भिडियो सहित) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > प्रम ओलीको दोश्रो पटक प्रत्यारोपण गरिएको मिर्गौलाका बारे डा. प्रेम ज्ञ‍वाली यसो भने ( भिडियो सहित)
प्रम ओलीको दोश्रो पटक प्रत्यारोपण गरिएको मिर्गौलाका बारे डा. प्रेम ज्ञ‍वाली यसो भने ( भिडियो सहित)
admin March 5, 2020 भिडियो, समाचार	0
डा. ज्ञवाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने टोली प्रमुख हुन्। उनीसहित चिकित्सकको टोलीले बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण सफलतासाथ सम्पन्न गरेको छ। ‘उहाँ अहिले नर्मल नै हुनुहुन्छ, होसमा आइसक्नुभएको छ। प्रत्यारोपण गरेको मिर्गौलाले राम्रो काम गरेको छ,’कुराकानीमा ज्ञवालीले भने, ‘कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले प्रत्यारोपणपछि राखिने वार्डमा राखेका छौं। त्यहाँ बसुञ्जेल हामी कसैलाई भेट्न दिँदैनौं।’
प्रधानमन्त्री ओली कुराकानी गर्न सक्ने भए पनि संक्रमणको डर भएकाले आराम गर्न लगाइएको उनले बताए। ‘एकदम अप्ठ्यारो केही पनि छैन अहिले,’ उनले भने, ‘अब उहाँको मिर्गौलाले कति पिसाब बनाउँछ, त्योअनुसार उहाँलाई सलाइन चढाउन पर्ने हुनसक्छ।’ बिहीबारबाट उनलाई खान दिने चिकित्सकहरूको तयारी छ। संक्रमण नहोस् भनेर ‘एन्टिबायोटिक’ चलाउने र शरीरले मिर्गौला अस्वीकार नगरोस् भनेर औषधि चलाउन पर्ने पनि ज्ञवालीले बताए।
प्रधानमन्त्रीलाई शल्यक्रिया वार्ड लैजानुअघि डा. ज्ञवालीले ‘तपाईंलाई केही भन्नुछ’ भनेर सोधेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्रीले ‘तपाईंहरू प्रति विश्वास छ’ भनेका थिए। शल्यक्रियापछि भने प्रधानमन्त्रीलाई ‘डिस्टर्ब’ नगरेको उनले बताए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई मिर्गौला दिने समिक्षा संग्रौलाको पनि स्वास्थ्य सामान्य छ। उनको शल्यक्रिया ‘ल्यापरोस्कोपिक’ विधिअन्तर्गत गरिएको हो। यो भनेको शरीर नचिरी सानो प्वाल मात्र बनाएर दुरबिनजडित उपकरण भित्र पठाएर गरिने शल्यक्रिया हो।
प्रधानमन्त्री ओली कुराकानी गर्न सक्ने भए पनि संक्रमणको डर भएकाले आराम गर्न लगाइएको उनले बताए। ‘एकदम अप्ठ्यारो केही पनि छैन अहिले,’ उनले भने, ‘अब उहाँको मिर्गौलाले कति पिसाब बनाउँछ, त्योअनुसार उहाँलाई सलाइन चढाउन पर्ने हुनसक्छ।’ बिहीबारबाट उनलाई खान दिने चिकित्सकहरूको तयारी छ।
संक्रमण नहोस् भनेर ‘एन्टिबायोटिक’ चलाउने र शरीरले मिर्गौला अस्वीकार नगरोस् भनेर औषधि चलाउन पर्ने पनि ज्ञवालीले बताए।प्रधानमन्त्रीलाई शल्यक्रिया वार्ड लैजानुअघि डा. ज्ञवालीले ‘तपाईंलाई केही भन्नुछ’ भनेर सोधेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्रीले ‘तपाईंहरू प्रति विश्वास छ’ भनेका थिए। शल्यक्रियापछि भने प्रधानमन्त्रीलाई ‘डिस्टर्ब’ नगरेको उनले बताए।
प्रधानमन्त्रीको सफल मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि डाक्टर भन्छन्ः प्रेसर थियो तर पनि विश्वास गर्नुभएकोमा खुशी छाैं (भिडियो सहित)
ओलीको उपचारमा संलग्न चिकित्सकको यो टिम, सफल मृगाैला प्रत्यारोपणपछि छल्कियो यस्तो खुशी!
घर जान्छु भनेर ट्र मा सेन्टरबाट निस्किएका डा. केसी टिचिङ पुगेपछि…